निर्मलाका हत्यारालाई मृत्युदण्ड दिन्थेँ
September 21, 2018 5:07 pm
प्रशन्ना पाण्डे पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित गायिका हुन् । छोटो समयमै निकै रुचाइन थालेकी प्रशन्ना विभिन्न अवार्डबाट सम्मानित छन् । उनीसंग कला र जीवनबारे गरिएको अक्षर -संवाद :
आफ्नो परिचय आफ्नै शब्दमा कसरी दिनुहुन्छ ?
एकदमै साधारण, सालिन, संवेदनसील र भावनात्मक छु ।
कलाकारितामै आकर्षित हुनुको कुनै खास अर्थ छ ?
मलाई यो क्षेत्रमा आनन्द लाग्छ । म संगीतमा रमाउँछु । सम्पूर्ण दुःख, पीडा विर्सन्छु । सुखानुभूति हुन्छ ।
कलाकार बन्नमा पारीवारिक सहमति कत्तिको छ ?
परिवारको सहयोग नभएको भए म अहिले यो ठाउँमा हुँदैन थिएँ । मानसिक तथा आर्थिक दुवै रुपले अहिलेसम्म समर्थन र सहयोग पाइरहेकी छु ।
तपाईँले कलाकारितामा गायन नै रोज्नुको रहस्य ?
मैले स्कुले जीवनदेखि नै संगीत अझ गायन पढेकी हुनाले र मेरो हजुरबुवा, हजुरआमा सँगको सांगीतिक माहोलमा हुर्केका कारण मेरो बाल मनोविज्ञानमै संगीत भिजेको हो भन्नुपर्ला ।
देख्नमा सुन्दर नै हुनुहुन्छ, मोडेल बन्ने रहर पलाएन ? किन ?
मोडलिङमा खासै रुची भएन । तर मेरा सुभेच्छुकहरुको अनुरोधमा मेरै आफ्ना केही गीतमा मैले मोडलिङ गरेकी छु । तर त्यो भन्दा मेरा लागि गायन नै हो जस्तो लाग्छ ।
नेपाली गायनमा लागेर बाँच्न हम्मे हम्मे छ भन्छन् नि, जीवन चलाउन अरु के गर्नुहुन्छ ?
स्थापित भइसकेका गायक, गायिकालाई यो क्षेत्रमा राम्रै आम्दानी पनि छ । हामीजस्तो नयाँ आगन्तुकका लागि निक्कै गाह्रो छ । अहिले त झन एउटा गीत गाउनै धेरै खर्च लाग्ने भएकाले लगानी नै महंगको छ । म स्वतन्त्र रुपमा धेरै संस्थामा आवद्ध छु । भिडियो प्रस्तोता पनि हुँ । त्यसैले जेत तेन चलेकै छ ।
कलाकारिता ग्ल्यामर पनि हो, यहाँ तमामौँ आकर्षण र सोसणका पनि सवाल उठ्ने गर्छन, यहाँले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ ?
ग्ल्यामर फिल्ड भएको हुनाले धेरै नै दुरुपयोग हुने गरेको सुनिन्छ । सुरुका दिनमा मान्छे नचिन्दा म पनि झन्डै समस्यामा परेकी थिएँ । तर मेरो प्रतिकार गर्ने बानी भएकाले जोगिएँ । अझ भनौ यस्तो कुरामा म अलि स्मार्ट नै छु । मान्छेको मानसिकता बुझिहाल्छु । त्यसो हुँदा अहिलेसम्म म त्यति ठूलो समस्यामा परेकी छैन । अर्थात सोसणमा परेकी छैन । कसैबाट सोसित हुँदा आवाज उठाउनुपर्छ । प्र्तिकार गर्नुपर्छ । यसो गर्न सक्यो भने भोलीका दिनमा यो फिल्डमा आउनेहरुले पनि सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् ।
कलामा अब्बल बन्न के कुराको आवश्यकता पर्छ झैँ लाग्छ ?
गलालाई नियमित रियाज गर्न आवश्यक छ । अथवा विधा अन्सारको अभ्यास गर्नुपर्छ । अनुशासित जीवन जीउने, राम्रो गीत छनोट गर्ने, मिडिया फ्रेन्डली बन्ने, बजारमा चलेको टे«न्डलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । समयअनुसार चल्न जरुरी छ ।
निजी कुरा गरौँ, पिउनु हुन्छ ?
पानी त म प्रसस्त पिउँछु हा हा । विभिन्न अवसरहरु, साथीभाइसँगको जमघटमा कहिलेकाहीँ रेडवाइन पनि पिउँछु ।
पिउँदा कस्तो अनुभूति हुन्छ ?
एकखालको आनन्द, बिन्दास । पिउने नै बिन्दास हुनका लागि हो । तनावदेखि दूर हुनका लागि नि ।
जीवनमा निकै खुसी र निकै दुःखी भएको दिन ?
म सानो साने कुरामा खुसी भैराको हुन्छु । धेरै छन् त्यस्ता पलहरु ठ्याक्कै याद छैन । अनि दुःखी भन्नुपर्दा मेरो हजुरबा, आमा वितेको क्षण र अल्पायुमै विजय अंकल वितेको कुराले सारै पीडा हुन्छ । जिन्दगी केही होइन रहेछ जस्तो लाग्छ ।
जीवनमा कसैसँग मन साँट्नु भयो ?
खोई के भनम, सायद कुनै समय साँटेकी थिएँ ।
सेक्सबारेको धारणा के हो ?
सेक्स प्राकृतिक नियम हो । यो मावन जीवनमा नभै हुँदैन । सेक्स आवश्यक भए पनि यो मर्यादामा रहेर हुने कुरा हो । यो सारीरिक आवश्यकता पनि हो । प्रजनन्का लागि पनि सेक्स अनिवार्य छ । प्रेममा सेक्स र सेक्समा प्रेम भएन भने यो सफल हुन्न । तर अहिले मानिसले सेक्सलाई अलिक गलत तरिकाले बुझिरहेका छन् ।
सोच्नुस तपाईँलाई एक दिनका लागि प्रधानमन्त्री घोषणा गरियो भने, पहिलो काम के गर्नुहुन्थ्यो ?
कस्ता कस्ताले वर्षौँ त केही गर्न सकेनन् । एक दिनमा त खासै केही गर्न सकिन्न । योजना बनाउँदै दिन वित्छ होला तर साँच्चै जादुजस्तै चेन्ज गर्न मिल्ने भए नेपाललाई एकदमै शिक्षित, सुन्दर, हराभरा बनाउँथे । नीति नियम कडा बनाउँथे । अहिले जुन हिंसा, बलात्कार बढेको छ, त्यसलाई कम गर्थेँ । न्याय दिने काममा अग्रसर हुन्थेँ । कञ्चनपुरकी निर्मलाजस्ताका हत्यारालाई सिधै मृत्युदण्ड दिन्थेँ ।